The Ab Presents Nepal » गरीबीमाथी अत्याचार : पैसा नतिरेकाे भन्दै म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले डोजर लगाएर घर भत्काए !
गरीबीमाथी अत्याचार : पैसा नतिरेकाे भन्दै म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले डोजर लगाएर घर भत्काए !
धनुषा –-: विदेश पठाउँदा लागेकाे रकम फिर्ता नगरेको भन्दै महोत्तरीमा एक जनाले डोजर लगाएर ऋणीकाे घर भत्काएका छन् ।
‘विदेशमा पतिको कमाइ थाेरै भएकाले घर व्यवहार चलाउन र २ छोरीको बिहे गर्न बाहेक केही सकिएको छैन, बस्ने घर पनि एजेन्टले भत्काएर सडकमा पुर्‍याए । अब हामी कहाँ बस्ने ? जाहिराले आँसु झार्दै भन्नुभयो ।
‘मसँग शेखले लिएको ऋण तिरेन । त्यसपछि मैले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा असुल उपर गरी पाऊँ भनी मुद्दा हालेँ । डेढ वर्ष अघि अदालतले घरघडेरी लिलाम गर्न आदेश दियो एजेन्ट ठाकुरले भने,पटक पटक घर खाली गर्न आग्रह गर्दा समेत मानेन । शनिबार अदालत, प्रहरी प्रशासन मिलेर उसको घर भत्कायो । यसमा मेरो कुनै दोष छैन ।